Ahoana ny fomba hisafidianana ny karazana mpamono afo tsara indrindra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-27
Ny mpamono afo voalohany dia natolotry ny mpahay simia Ambrose Godfrey tamin'ny 1723. Hatramin'izay dia maro karazana fitaovana famonoana novolavolaina, novaina ary novolavolaina. Saingy ny zavatra iray dia mijanona tsy miova na inona na inona vanim-potoana - singa efatra no tsy maintsy misy raha misy ny afo. Ireo singa ireo dia misy oksizenina, hafanana ...
Hatraiza ny fiarovana ny afo amin'ny afo?
Ny mpamono afo dia mampiasa sifotra mamorona sarimihetsika (AFFF) aqueous mba hanampiana amin'ny famonoana ny afo sarotra iadiana, indrindra ny afo misy solika na ranon-javatra mirehitra hafa ‚fantatra amin'ny fahamaizan'i Class B. Na izany aza, tsy ny volon'afo avokoa no sokajiana ho AFFF. Ny famolavolana AFFF sasany dia misy sokajy chemi ...
Fomba 4 hikitihana ny fahafahan'ny data sy hampiasana azy hanatsarana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fiaraha-monina
Raha vao niditra tao amin'ny serivisy afo i Bill Gardner tany Texas ambanivohitra tamin'izany, dia tonga izy naniry ny hitondra fiovana tsara. Androany, amin'ny maha lehiben'ny mpamono afo miasa an-tsitrapo azy, mpamono afo an-tsitrapo ary talen'ny vokatra mpamokatra afo ho an'ny ESO, dia hitany ihany koa ireo hetahetany amin'ny taranaka ankehitriny sy ho avy. Ho fanampin ...